Bottlefeeding your Baby - Somali
Ilmahaaga yar 4-6 da bilood ee ugu horeysa waxuu u baahan yahay caanaha naaska oo keli ah ama caanaha budada ah ee la qaso oo feero (iron-fortified) ay ku jirto. Feeradu muhiim ayey u tahay koriinshaha maskaxda ilmaha. Feerada caanaha la qaso ku jirta saxarada kuma adkeyso ilmaha yaryar.
U diyaarinta caanaha la qaso si fiican/badbaado leh
Marka hore gacmahaada dhaq
Wax walba nadiifi: meesha aad caanaha ku qaseysid, gasaca/koombada caanaha dusheeda iyo birta gasaca/koombada lagu furo.
Nadiifi/dhaq masaasadaha mararka badan la isticmaalo, dabolka iyo caaga ilmuhu nuugaanba mar kasta ee aad isticmaashid. Biyo kulul ku karkari ilaa 5 daqiiqo.
Isticmaal biyo fiican (nadiif ah). Tubada biyaha qaboow soo deysa ha furnaato 2 daqiiqadood inta aadan isticmaalin ka hor. (Maadada Lead ka la yiraahdo ayaa ku darsoomi karta biyaha hadii biyuhu tubo bir ah ay habeen ku baryaaan.) Biyaha "Ilmaha yaryar" la siiyo looma baahna.
Haddii biyaha aad cabtaan ay biyo ceel yihiin, ha la baaro in aysan dhib keeneynin/nadaafadooda
Isticmaal caanaha la qasay ee firintijeerka/talaajadda la geliyey isla maalintaas ama ilaa maalinta ku xigta. Caano kasta oo 24 saac ka badan qasnaa iska daadi oo ha isticmaalin.
Caano kasta oo la qasay oo aan talaajad la gelin (dibada yaalay) ilaa 2 saac oo dhan, iska daadi oo ha isticmaalin. Hadii aad caano la qasay kuleysid ama uu ilmo caano soo reebo, iska daadi caanahaas hal saac kadib.
Inta aad is leedahay ilmahaagu wuu cabi karaa oo caanaha qasan ah ku shub masaasadda. Marka aad caanaha siiso ka dib, haraaga soo haray iska daadi. Hadii aad caanahaas soo haray mar danbe ilmaha siisid, xanuun ayey ilmaha u keeni karaan.
Si aad masaasad u kululeysid, biyo kulul ku fur ama dhex geli weel ay biyo kululi ku jiraan. HA ISTICMAALIN microwave si aad caanaha u kululeysid! Caanaha qasan microwave ku aad ayuu u kululeyn karaa xitaa adigoo masaasada dusheeda kuleyl yar ka dareemaya. Ku dhibci caanaha gacantaada dusheeda si aad u hubisid kuleylkooda inta uu gaarsiisan yahay ina aadan ilmaha siin ka hor.
Talooyin Quudinta ilmaha ah
Ilmuhu xadi kala duwan ayey cunaan.
Inta ku filan oo caano qasan ah ee ilmuhu qaadan karo isaga ayey ku xiran tahay.
24 saacadood gudahood, ilmahaaga waxaa laga yaabaa in uu cabo:
0 ilaa 1 bil 14 ilaa 28 ounces
1 ilaa 2 bilood 23 ilaa 34 ounces
2 ilaa 3 bilood 25 ilaa 40 ounces
3 ilaa 4 bilood 27 ilaa 39 ounces
Maalmaha qaarkood ilmahaaga yar waxaa laga yaabaa in uu cabo in ka badan inta ugu sareysa ee shaxda kore ku qoran ama in ka yar inta ugu hooseysa ee shaxda kore ku qoran. Hadii uu koriinshaha ilamahaagu kor u socdo/fiican yahay, sidan haday dhacdo waa caadi oo wax dhib ah ma laha.
U diyaar garoow in aad caano badan qastid marka ay cunno qaadashada ilmahaagu kor u kacdo.
Diliq uu ilamuhu canaha soo dilqayo waa caadi. Marka uu ilmuhu 1-sanad jir gaaro ayaa sida badan diliqu joogsadaa.
Si aad diliqqa u yareysid:
Ka fogoow in aad ilmaha caanaha ka badisid. Ha welwelin haduusan ilmuhu masaasada canaha ka dhameynin. Marka ay caloosha ilmuhu buuxsanto, wixii dheeraad ah ee la siisiiyo kor ayey dib ugu soo laaban doonaan.
Marka ilmaha caanaha la siinayo iyo ugu yaraan 20 daqiiqo kadib marka uu caanaha nuugay waa in ilmaha kor loo hayaa isaga oo madixiisu kor jiro. Seexintu diliqa uun bey sii badin doontaa.
Masaasada ibteeda caanuhu si joogto ah ha uga soo bexeen. Hadii ilmuhu hawo nuugo, wuu daacan doonaa waxaana laga yaabaa in uu dilqo.
Daaco ka raadi ilmaha hadii uu joojiyo caano cabidda uuna u eg yahay in ay wax dhib ku hayaan.
Hadii aad weli welwel ka qabtid sida uu ilmahaagu u dilqo badideeda, kala hadal dhakhtarkaaga, qolooyinka quud siinta qaabilsan (dietition) ama kalkaaliye/kalkaaliso caafimaad.
Sug oo ha ku bilaabin siiriyaal illaa ilmahaagu uu diyaar uga noqonayo in uu qaaddo wax ku cuno, badanaaba qiyaastii waa 6 bilood jir.
Masaasada cereal ha ugu shubin. Hadii cereal ilmaha lagu bilaabo iyaga oo aad u yar, waxay keeni kartaa ilmaha oo raashinka laga badiyo iyo raashin ku sixasho/mergasho.
Malab ha siin inta sanadka koowaad lagu guda jiro. Malabku wuxuu keeni karaa cunno-ku-sumoobid.